Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Bahamas njem njem » Ihe dị ọhụrụ na Islands nke Bahamas na Mee
Agwaetiti The Bahamas na-echere ndị njem dị njikere ịhazi ezumike oge ezumike ha. Ndị chọrọ ileta aja mmiri na-adịghị mma na mmiri na-acha anụnụ anụnụ nke agwaetiti ga-ahụ ahụmịhe paradaịs nke nrọ ha na The Bahamas.
Usoro mmemme a na-eweta ndị njem Ndị mmadụ, na-ejikọ ha na ndị obodo.
Beachfront na-eme njem dị kilomita 50 site n'ụsọ oké osimiri Florida ga-amalite na nke mbụ osimiri kachasị ọhụrụ, Resorts World Bimini Beach.
Restaurantlọ oriri na ọarụ Sugụ Sugar na-emepe ọnọdụ ọhụrụ etinyere n'ime Baha Mar n'àgwàetiti nke New Providence.
Ndị Mmadụ Na-aga Virtual - Mmemme ndị mmadụ hụrụ n’anya nke jikọtara ndị ọbịa na ndị obodo site na ahụmịhe ahaziri maka afọ 45 gara aga, na-abanye kpọmkwem n’ụlọ na ihu nke wanderlusters. Usoro mmemme a na-enye ndị isi nnọchi anya obodo na Bahamas usoro isiokwu enweghị atụ ise n'efu. Iji tinye akwụkwọ Ahụmịhe Ndị Mmadụ Na-agaghị Echefu Echefu, isi na: https://www.bahamas.com/plan-your-trip/people-to-people .
Increbawanye ụgbọ elu na Bahamas - American Airlines kwupụtara ụgbọ elu ụgbọ elu si Austin-Bergstrom International Airport (ABIA) gaa Lynden Pindling International Airport (NAS) bido na June 5, 2021. Frontier Airlines ekwuputala na ụgbọ elu si Miami International Airport (MIA) gaa Nassau (NAS) ga nwee ike ugboro anọ n'izu malite na July 2021.
Viva Wyndham Fortuna Beach na-emeghe - Viva Wyndham Fortuna Beach dị na Freeport, Grand Bahama Island na-anabata ndị ọbịa na-amalite ọnwa a. Ebe a na-eme njem niile nwere ọdọ mmiri mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, ụkwụ 4,000 nke ụsọ mmiri mara mma na-acha ọcha, ọnụ ụlọ nke osimiri na ndị ọzọ.
Ebe ezumike World Bimini nke New Beach - Ebe a na-eme n'akụkụ osimiri dị naanị kilomita 50 site n'ụsọ oké osimiri Florida ga-amalite na nke mbụ osimiri kachasị ọhụrụ, Resorts World Bimini Beach, na Mee 14, 2021. Ihe mgbakwunye ọhụrụ ahụ nwere ọdọ mmiri ọdọ mmiri abụọ, hammocks, oke osimiri na ọdọ mmiri ndị ọzọ, ogige abụọ, oke osimiri na-eri nri na ọtụtụ ndị ọzọ.